आजबाट घट्यो विद्युत् मह, शुल, अब बिजुली बाल्दा कति शुल्क लाग्छ त ? – Ap Nepal
आजबाट घट्यो विद्युत् मह, शुल, अब बिजुली बाल्दा कति शुल्क लाग्छ त ?
काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगको गत कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार आजबाट बिजुलीमा नयाँ महशुल लागू भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजबाट नयाँ महशुल दरअनुसार बिलिङ गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो उपभोक्ताको शुल्क घटाइएको छ ।
Prevटिक-टकमा स्कुल ड्रेसमानै नाचेर भाईरल दाजु-भाई मिडियामा । ३ बाउछोरा नै ना,च्छन्, बुवा भन्दा कसैले पत्या, एन (रमाइलो कुराकानी सहितको भिडियो हेर्नुस)
Nextआजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल मंसिर २ गते बिहीवार इश्वी सन २०२१ नोभेम्वर १८ तारीख